Milaza ny Fanadihadiana Fa Tsy Matoky Kokoa ny Governemanta Ireo Tanora Mpiserasera Media Sosialy Ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2017 6:59 GMT
Sary avy amin'ny HKFP.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Kris Cheng ary navoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 4 Janoary 2017. Navoaka ato amin'ny Global voices ny dika eto ambany noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Ny media sosialy no loharanom-baovao lehibe ho an'ny 46 isanjaton'ny tanora ao Hongo Kong, ary maherin'ny 77 isanjato amin'ity vondrona mpisera media sosialy ity no tsy matoky ny fanjakana, araka ny hitan'ny fikarohana vao haingana
Notarihan'ny Foiben'ny Fanadihadiana ny Tanora ao amin'ny Ivontoeran'ny Fianarana Azia-Pasifika ao amin'ny Oniversite Shinoa ao Hong Kong ny fitsapan-kevitra. Nampiseho izany fa ny Facebook no sehatra be mpampiasa indrindra izay 67,7 isanjaton'ireo natao fanadihadiana no nilaza fa ity no tranonkala media sosialy tsidihan'izy ireo matetika. Arahin'ny WhatApps amin'ny 14,4 isan-jato ary ny Instagram amin'ny 12,2 isanjato
Eo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 29 taona ireo nohadihadiana. Mitotaly 829 ny olona natao fanadihadiana tamin'ny alalan'ny finday teo anelanelan'ny volana Oktobra sy Novambra 2016.
Nahita ihany koa ny fikarohana fa na dia eo aza ny hetsika antserasera matetika ataon'ny tanora, zara raha nandray anjara tamin'ny hetsika ara-politika ivelan'ny aterineto ny ankamaroan'izy ireo. Ary raha milaza ampahibemaso ny firehana ara-politika hiringiriny ao aminy ireo olona manana izany, dia maherin'ny 60 isanjato no nilaza ny tsy fetezan'izany amin'ny ambaratonga isan-karazany.
Satria vitsy ny isan'ny fihetsiketsehana miely patrana notarihan'ny tanora mpikatroka, tahaka ny hetsika manohitra ny fampianaram-panjakana tamin'ny taona 2012 sy ny sit-in manohana ny demaokrasia tamin'ny faramparan'ny taona 2014, mihevitra ny vahoaka amin'ny ankapobeny fa miha hiringiriny hatrany ny tanora ao Hong Kong.
Nandrisika ny governemanta hanao fifandraisana amin'ny alalan'ny media sosialy ihany koa ireo manampahaizana manaramaso ny fikarohana
Ho an'ireo tanora rehetra nohadihadiana, 66,6 isanjato no tsy dia afa-po- na tena diso fanantenana – amin'ny governemanta, raha 63,5 isanjato kosa no nilaza fa somary na tena tsy matoky mihitsy ny governemanta izy ireo.
Ny tanora nampiasa media sosialy ho loharanom-baovaony voalohany amin'ny raharaham-bahoaka no tena hita fa diso fanantenana amin'ny zava-bitan'ny governemanta, hita fa tsy dia matoky ny governemanta ny 77 isan-jaton'ireo natao fanadihadiana izay mamaky vaovao amin'ny sehatra ara-tsosialy, ary amin'ireo mijery vaovao amin'ny loharano hafa, ny 51,1 isanjato ihany no mahita fa tsy azo atokisana ny governemanta.
Zavatra hafa tsikaritra:
61,5 isanjaton'ny tanora 18 ka hatramin'ny 29 taona no nifidy tamin'ny Fifidianana Filan-kevitry ny Mpanao lalàna tamin'ny taona 2016, kanefa maro no tsy nanatevin-daharana ny hetsika ara-politika hafa ivelan'ny aterineto.
44,4 isanjaton'ireo namaly ny fanadihadiana no tsy nandray anjara mihitsy tamin'ny hetsika tahaka ny diabe, fanasoniavana taratasy fanangonan-tsonia, mitafy/mampiseho marika/famantarana mifandray amina hetsika ara-tsosialy.
24,8 isanjaton'ireo namaly ny fandihadiana no nilaza fa tsy mba nandra anjara tamin'ny hetsika ara-politika antseraera.
Mikasika ny hetsika ara-politika kosa, nilaza ny ankamaron'ireo namaly ny fanadihadiana fa nandefa na nizara vaovao momba ny raharaham-bahoaka na koa naneho hevitra antserasera tamin'ny herintaona. Nilaza ny 25 isanjato fa nanao izany indray mandeha na indroa, Ny 22 isanjato nilaza fa imbetsaka nanao izany, ary ny 12,3 isanjato nilaza fa matetika nanao izany.
Maherin'ny 80 isanjaton'ireo namaly ny fanadihadiana no nilaza fa tsy mahita olana mihitsy raha misy olona sitrana tamin'ny aretin-tsaina na olona manana foko hafa nitolona ampahibemaso ho an'ny zon'izy ireo.
Maherin'ny 70 isanjato kosa nilaza fa tsy mahita olana raha amin'ny pelaka sy ny mpivaro-tena.
Na izany aza, 39 isanjato monja no nilaza fa tsy mahita olana izy ireo raha misy olona manana firehana ara-politika hiringiriny milaza ny firehàny ampahibemaso.
Nilaza i Stephen Chiu Wing-kai, mpampianatra ao amin'ny sampana sosiolojia ao amin'ny oniversite fa maneho taratra ny zavamisy ny voka-pikarohana fa vitsy ny tanora mavitrika amin'ny hetsika ara-politika. Nampiseho izany hoy izy fa tsy mari-pototra ny hevitra momba ny tanora ho lasa hiringiriny ara-politika.
Wilson Wong Wai-ho, mpampianatra mpiara-miasa ao amin'ny fitantanam-panjakana sy fitantanam-bahoaka kosa nilaza fa vitsy ny departemantam-panjakana manana kaonty media sosialy, ary raha tena maniry hifandray amin'ny tanora tokoa ny fanjakana, dia tokony hanamafy ny fifandraisana ao amin'ny media sosialy.